Sannadka cusub ee Shiinaha ayaa imanaya
Sannadka Cusub ee Lunar ee 2021 waa Febraayo 12. Inta lagu guda jiro Dabaaldegga Gu'ga, Shiinaha Han iyo qaar ka mid ah qowmiyadaha laga tirada badan yahay waxay qabtaan dabaaldegyo kala duwan. Hawlahani waxay inta badan caabudaan awoowayaasha, oo leh qaabab hodan ah iyo midabbo leh iyo sifooyin qowmiyadeed hodan ah. ...
Waxaan kaqeyb galnay Xerada Tababarka Ganacsi ee Alibaba usbuucii hore
Amso Solar waa koox dhalinyaro ah, dhalinyarada da 'yarta ahna uma baahna kaliya mushahar laakiin sidoo kale waxay u baahan yihiin jawi ay ku horumarin karaan. Amso Solar waxay had iyo jeer ahayd shirkad xooga saarta tababarka shaqaalaha, anaguna waxaan diyaar u nahay inaan ka caawinno qofkasta oo shaqaale ah inuu gaaro is-horumarineed Waxaan aaminsanahay in trai shirkadeed ...
Unugyada qorraxda ee dabiiciga ah waxay sameeyeen rikoodh cusub, oo leh wax-ku-beddelasho beddelaad ah 18.07%
Tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay ee OPV (Organic Solar Cell) oo ay si wadajir ah u sameeyeen kooxda Mr Liu Feng oo ka socota jaamacadaha Shanghai Jiaotong iyo Beijing University of Aeronautics iyo Astronautics ayaa la cusbooneysiiyay ilaa 18.2% iyo waxtarka beddelka oo loo sameeyay 18.07%, taasoo dhigeysa rikoor cusub. ...
Tiknoolajiyad cusub oo ku jirta unugyada qorraxda ku shaqeeya ee warshadaha sawir-qaadista ah
Unugyada cadceedda ee hufan ma aha fikrad cusub, laakiin sababo la xiriira dhibaatooyinka xagga maadiga ah ee lakabka semiconductor, fikraddan ayaa adkaatay in loo beddelo ficil ahaan. Si kastaba ha noqotee, dhowaan, saynisyahanno ka tirsan Jaamacadda Umadda Incheon ee Kuuriyada Koonfureed waxay soo saareen unug cadceeda ku shaqeeya oo hufan ...
Muxuu yahay 9BB qoraxda
Suuqa ugu dambeeyay, waxaad maqleysaa dadka oo kahadlaya 5BB, 9BB, M6 nooca 166mm unugyada qoraxda, iyo kalabar cadceeda la jaray. Waxaa laga yaabaa inaad ku jahwareerto dhammaan shuruudahaan, maxay yihiin? Maxay u taagan yihiin? Maxay ku kala duwan yihiin? Qodobkaan, waxaan si kooban ugu sharxi doonnaa dhammaan fikradda lagu xusay ...
waa maxay waxyaabaha ku jira qeybta qoraxda
Ugu horreyntii, bal aan jaleecno jaantuska waxyaabaha ka kooban baalayaasha ku shaqeeya cadceedda. Lakabka aadka u dhexe waa unugyada qoraxda, iyagu waa furaha iyo aasaasiga qaybta cadceeda. Waxaa jira noocyo badan oo unugyada qorraxda ah, haddii aan ka wada hadalno cabbirka cabbirka, waxaad heli doontaa saddex cabbirro waaweyn oo qorraxda ah ...
Tilmaamaha 2020 SNEC
14-kii SNEC waxaa lagu qabtay 8-10-kii Ogosto 2020 magaalada Shanghai. In kasta oo dib u dhac uu ku yimid faafida, dadku wali waxay muujiyeen dareen xoogan oo ku aadan dhacdada iyo sidoo kale warshadaha qoraxda. Dulmarka guud, waxaan ku aragnay farsamooyin cusub oo waaweyn oo ku shaqeeya baallayaasha cadceedda oo diiradda saaraya cabbirka ballaaran ee looxa, cufnaanta sare, ...